Izinto ekujoliswe kuzo ze-ITO ikakhulu eJapan
Izinto ze-ITO yinto ye-n-uhlobo semiconductor, Okubandakanya umgubo we-ITO, ekujoliswe kuko, ukucoceka okuqhubayo kunye nefilimu ebonakalayo ebonakalayo yokuqhuba. Izicelo zayo eziphambili zahlulwe zaba: imbonakalo lenjongo tyaba (FPD) ishishini, ezifana yikristale ulwelo bonisa (I-LCD), umboniso wefilimu ohambisa umboniso omncinci (I-TFT-LCD), umboniso we-electroluminescent (THE), uboniso lwentsimi (FEDI), ukukhanya kwe-electro-organic ekhipha ipaneli ebonakalayo (OELD), Ukubonisa iplasma (PDP), njl.; imboni ye-photovoltaic, ezinje ngeeseli ezicekeceke zeeseli zelanga; iglasi esebenzayo, njengeglasi ebonakalayo ye-infrared, iglasi ye-anti-ultraviolet enje ngeglasi yekhethini, inqwelomoya, imoto efestileni yokulwa inkungu, imaski kunye neglasi Iindawo ezintathu eziphambili ezinjengeediski zohlobo.
Kwi 2008, Imfuno yonyaka yehlabathi yezixhobo ekujoliswe kuzo ze-ITO zazimalunga 1,500 iitoni, ixabiso lalimalunga ne-US $ 1,000 / kg, kwaye intengiso iyonke yayimalunga ne-US $ 1.5 yezigidigidi..
Imfuno yangoku yasekhaya yeethagethi zeITO imalunga 150 Ngophuhliso loqoqosho lwase China kunye nokwanda kwecandelo lezamashishini labasebenzi, abaninzi abavelisi bephaneli yokubonisa eJapan, ETaiwan, kwaye iSouth Korea ihambise iziseko zayo zokuvelisa kwilizwekazi lase China. Kwilixa elizayo, ilizwekazi lase China liya kuba liziko elikhulu lemveliso yeLCD. Kuqikelelwa ukuba ibango lasekhaya lezinto ekujoliswe kuzo zeITO 2010 iya kugqitha 500 iitoni.
Ukubonelela ngezixhobo ekujoliswe kuzo ze-ITO, Abathengisi abaphambili ikakhulu baseJapan. Phakathi kwabo, Amandla aseJapan, IJapan Mitsui Mining Corporation, neJapan Tosoh zibandakanya ngaphezulu kwe 80% Abenzi basekhaya abaziintloko baquka i-Shandong Weihai Blue Fox Special Material Development Co., Ltd., Iqela leZhuzhou lokunyibilikisa, ILiuzhou Huaxi Group Co., Ltd., kunye neChina Umbala weSizwe (Ningxia) Iqela laseMpuma Co., Ltd..Ngenxa yokusikelwa umda kweteknoloji yokuvelisa itekhnoloji yokuvelisa eTshayina, iimveliso ekujoliswe kuzo zincinci ngobukhulu kwaye ziphantsi kumgangatho. Uninzi lweemveliso lunokusetyenziswa kuphela kwiimarike eziphakathi kunye nezisezantsi. Zonke iithagethi zomboniso ophakamileyo wasekhaya zixhomekeke ekungenisweni elizweni..
Ngaphambili: The difference between vacuum coating and optical coating
Okulandelayo: Future development trend of ITO target